Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo todobaadka soo socda dib uga furmaya Jowhar – STAR FM SOMALIA
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo todobaadka soo socda dib uga furmaya Jowhar
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan heleyno ayaa sheegaya in todobaadka soo socda dib loo bilaabi doono shirkii Jowhar ee maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo in muddo ah hakad ku jiray.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in maalinta Isniinta dib u furmi doono shirka maamul u sameynta labada gobol, iyadoo uu socdo diyaar garow ku aadan sidii wajiga labaad ee shirka loo sii ambaqaadi lahaa.
Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Odawaa ayaa lagu wadaa in horaanta todobaadka soo socda uu tago Jowhar, si uu u furo wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo hakad ugu jiray markii odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan ay qaadaceen.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Dowladda Soomaaliya ka go’an tahay inay dedejiso dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo ay guuldareysteen dadaalo la doonayay in qaar ka mid ah odayaasha reer Hiiraan ee diidan shirka Jowhar lagu qanciyo inay ka qeyb galaan shirka.
Dadaaladii uu waday Urur Goboleedka IGAD ayaa fashilmay, iyadoo Odayaasha dhaqanka uu hoggaamiyo Ugaas Xasan ay ku adkeysteen in aanay Jowhar tageyn, isla markaana aysan marnaba ogolaan doonin in Hiiraan lagu daro Shabeellaha Dhexe.
Odayaashii dhaqanka ee ka soo jeeday Hiiraan ee bishii Maarso dowladda heshiis la gaartay ayaa la filayaa inay Jowhar tagaan, si ay uga qeyb galaan furitaanka wajiga labaad ee shirka oo u gudbi doona heerkiisa dhinaca siyaasada iyo xareynta ergooyinka.
Bishii April ayay aheyd markii dib loo furay shirka Jowhar, balse waxaa uu u socon waayay caqabado ka dhashay diidmada odayaasha dhaqanka reer Hiiraan, lama oga sida dowladda ku socodsiin karto shirka furmaya todobaadka soo socda, iyadoo ay maqan yihiin qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ee reer Hiiraan, kuwaasoo horay u qaadacay shirka Jowhar.